Exchange rates, mashoko
Historical Exchange nokuda mari zvose munyika kubvira muna 1992 kusvikira nhasi. Currency Exchange machati kwegore rimwe nerimwe, mwedzi uye vokupedzisira 20 makore.
US dhora Euro
Afghan afghani Albanian naAmareki
Algerian Dinar Antilliaanse gulden
Argentine Peso Armenian dram
Aruban florin Aussie dhora
Azerbaijani manat Bahamian dhora
Bahrain Dinar Bangladesh kukurouka
Barbados dhora Belarusian Ruble
Belize dhora Bermuda dhora
Bhutan Dollar Bitcoin
Bolivian boliviano Bosnia and Herzegovina convertible chiratidzo
Botswana pula ye Brazil Dirham
Brazilian chaiyo Brunei dhora
Cambodian Riel Canadian dhora
Cape Verde shield Cayman Islands Dhora
Chilean Peso Chilean Unidad of Fomento
Comoran Franc Costa Rica muura
Cuban Peso Currencykuva
Cyprus paundi Czech they koruna
Danish korona Deutsche chiratidzo
DzokuCongo Franc ECU
East Caribbean dhora Egyptian paundi
Euro Euro Rial
Falkland Islands paundi Fiji dhora
Franc Swiss France Frank
Georgian emalari Ghana cedi
Gibraltar paundi Greek yemadhirakema
Guarani Guernsey paundi
Guinea Franc Guyana dhora
Haitian Lira Honduran Lempira
Hong Kong Dhora Hryvnia
Indian Rupee Indonesian Rupee
Irish paundi Israeli shekeri itsva
Italian Lire Jamaican dhora
Jersey paundi Jordan Dinar
Kwanza Kyrgyzstani uko
Lebanese paundi Leone
Liberia dhora Libyan Dinar
Lilangeni Lithuanian Rial
Macedonian raha Malawi Kwacha
Maltese Lira Manx paundi
Mexican Peso Mongolian Vatu
Nakfa Nepalese Rupee
New Zealand Dhora New Zealand yequetzal
North Won Korean Norwegian Krone
Notes Omani Dinar
Panamanian Balboa Paundi Syrian
Paundi wakanaka Peruvian Nuevo Sol
Portuguese shield Qatari Riyal
SDR (Special richiswedera kodzero) Saint Helena paundi
Sao Zimbabwe Dollar Saudi Riyal
Singapore dollar Slovak they koruna
Slovenian tolar Solomon Islands Dhora
South Sudanese paundi Spanish peseta
Sri Lanka Rupee Standard dhora
Sudanese paundi Swedish Krona
Taiwan itsva dhora Tajikistani somoni
Tanzania shilling Thai volt
Trinidad uye Tobago dhora Turkmenistan itsva manat
Turkmenistan manat US dhora
Uganda shilling United Arab Emirates
Uruguayan Peso Uzbekistan Verengai
Vietnamesse dong VokuMoldova Leu
WeColombia Peso YeAustria shilling
YeBelgium Franc Yemeni Rial
Yen Yugoslavian itsva Dinar
Zambian Kwacha Zenze mucherechedzo
Zimbabwe Dollar Zimbabwe dollar
Zimbabwe guilder Zimbabwean dollar
Zimbabwean itsva Kwanza Zimbabwean muura
ZvomuNicaragua Cordoba 1 Troy paaunzi chendarama (yemagetsi goridhe / Electronic goridhe)
1 Troy paaunzi sirivha
Pamusoro nokuda ndandanda pamusoro Exchange
Mari yekutsinhana uye makotesheni emari yepasi rose e 2021.
Mwero wekutsinhanha kwezuva nezuva (quote) yemari yepasi rose ye 2021. Mwero wekutsinhanha kwezuva nezuva (quote) yemari yepasi rose ye 2021. Nhoroondo ye US dhora makotesheni ezuva rimwe nerimwe re 2021.
Mari yekuchinjana, mari yemari yenyika inotenga 2020.
Nhoroondo yezuva nezuva yemari yemari pasi rose. Nhoroondo yezuva nezuva yemari yemari pasi rose. Nhoroondo yemakotesheni emari yezuva rega rega re 2020.
Nhoroondo yemitengo yekutsinhanha uye makotesheni e 2019.
Mwero wekutsinhanha kwezuva nezuva (quote) yemari yepasi rose ye 2019. Mwero wekutsinhanha kwezuva nezuva (quote) yemari yepasi rose ye 2019. Nhoroondo yemari yekutsinhana kwemari yese kune vese.
Quotes uye mitengo yekutsinhanha yemari yepasi rose ye 2018.
Nhoroondo yezuva nezuva yemari yemari pasi rose. Nhoroondo yezuva nezuva yemari yemari pasi rose. Mwero wekutsinhanha kwezuva nezuva (quote) yemari yepasi rose ye 2018.
Quotes uye mitengo yekutsinhanha yemari yepasi rose ye 2017.
Nhoroondo yeiyo chiyero chekutsinhana chero mari yenyika 2017 yezuva rega rega. Nhoroondo yeiyo chiyero chekutsinhana chero mari yenyika 2017 yezuva rega rega. Nhoroondo izere yemazuva ese mari inotemerwa kwegore rega.
Mari yekutsinhana uye makotesheni e 2016.
Pano unogona kuwana chiyero chechero mari yezuva chero ripi zvaro. Pano unogona kuwana chiyero chechero mari yezuva chero ripi zvaro. Chiyero chekutsinhana kana makotesheni e US dhora ye 2016 yemwedzi wega wega uye yezuva rega rega.
Quotes uye mitengo yekutsinhanha yemari yepasi rose ye 2015.
Isu tinochengeta nhoroondo yemamirioni ese emari yezuva rega rega. Isu tinochengeta nhoroondo yemamirioni ese emari yezuva rega rega. Nhoroondo yeiyo chiyero chekutsinhana chero mari yenyika 2015 yezuva rega rega.
Nhoroondo yematanho uye mitengo yekutsinhanha mu 2014.
Nhoroondo yenyika US dhora mwero wekutsinhanisa we 2014 yezuva rega rega. Nhoroondo yenyika US dhora mwero wekutsinhanisa we 2014 yezuva rega rega. Pano unogona kuwana chiyero chechero mari yezuva chero ripi zvaro.
Nhoroondo yemitengo yekutsinhanha uye makotesheni e 2013.
Nhoroondo yemakotesheni emari yezuva rega rega re 2013. Nhoroondo yemakotesheni emari yezuva rega rega re 2013. Nhoroondo yezuva nezuva yemari yemari pasi rose.
Nhoroondo yematanho uye mitengo yekutsinhanha mu 2012.
Isu tinochengeta nhoroondo yemamirioni ese emari yezuva rega rega. Isu tinochengeta nhoroondo yemamirioni ese emari yezuva rega rega. Mari yekutsinhanha yezuva rechokwadi re 2012.
Mari yekuchinjana, mari yemari yenyika inotenga 2011.
US dhora mwero wekutsinhana uye makotesheni e 2011 yezuva rega rega. US dhora mwero wekutsinhana uye makotesheni e 2011 yezuva rega rega. Nhoroondo yemari yekutsinhana kwemari yese kune vese.
Quotes uye mitengo yekutsinhanha yemari yepasi rose ye 2010.
Nhoroondo yeiyo chiyero chekutsinhana chero mari yenyika 2010 yezuva rega rega. Nhoroondo yeiyo chiyero chekutsinhana chero mari yenyika 2010 yezuva rega rega. Chiyero chekutsinhana kana makotesheni e US dhora ye 2010 yemwedzi wega wega uye yezuva rega rega.
Nhoroondo yemitengo yekutsinhanha uye makotesheni e 2009.
Nhoroondo izere yemazuva ese mari inotemerwa kwegore rega. Nhoroondo izere yemazuva ese mari inotemerwa kwegore rega. Nhoroondo ye US dhora makotesheni ezuva rimwe nerimwe re 2009.
Mari yekutsinhana uye makotesheni e 2008.
Nhoroondo yezuva nezuva yemari yemari pasi rose. Nhoroondo yezuva nezuva yemari yemari pasi rose. US dhora mwero wekutsinhanha wezuva rakakodzera re 2008.
Mari yekutsinhana uye makotesheni emari yepasi rose e 2007.
Pano unogona kuwana chiyero chechero mari yezuva chero ripi zvaro. Pano unogona kuwana chiyero chechero mari yezuva chero ripi zvaro. Nhoroondo ye US dhora makotesheni ezuva rimwe nerimwe re 2007.
Quotes uye mitengo yekutsinhanha yemari yepasi rose ye 2006.
Chiyero chekutsinhana kana makotesheni e US dhora ye 2006 yemwedzi wega wega uye yezuva rega rega. Chiyero chekutsinhana kana makotesheni e US dhora ye 2006 yemwedzi wega wega uye yezuva rega rega. Pano unogona kuwana chiyero chechero mari yezuva chero ripi zvaro.
Mari yekuchinjana, mari yemari yenyika inotenga 2005.
Nhoroondo yemakotesheni emari yezuva rega rega re 2005. Nhoroondo yemakotesheni emari yezuva rega rega re 2005. US dhora mwero wekutsinhana uye makotesheni e 2005 yezuva rega rega.
Mari yekuchinjana, mari yemari yenyika inotenga 2004.
Chiyero chekutsinhana kana makotesheni e US dhora ye 2004 yemwedzi wega wega uye yezuva rega rega. Chiyero chekutsinhana kana makotesheni e US dhora ye 2004 yemwedzi wega wega uye yezuva rega rega. Mari yekutsinhana uye makotesheni e 2004 yezuva rega rega.
Nhoroondo yemitengo yekutsinhanha uye makotesheni e 2003.
Database renhoroondo yekutsinhana. Database renhoroondo yekutsinhana. Mwero wekutsinhanha kwezuva nezuva (quote) yemari yepasi rose ye 2003.
Mari yekutsinhana uye makotesheni e 2002.
Mwero wekutsinhanha kwezuva nezuva (quote) yemari yepasi rose ye 2002. Mwero wekutsinhanha kwezuva nezuva (quote) yemari yepasi rose ye 2002. Nhoroondo ye US dhora makotesheni ezuva rimwe nerimwe re 2002.
Mari yekuchinjana, mari yemari yenyika inotenga 2001.
Chiyero chekutsinhana kana makotesheni e US dhora ye 2001 yemwedzi wega wega uye yezuva rega rega. Chiyero chekutsinhana kana makotesheni e US dhora ye 2001 yemwedzi wega wega uye yezuva rega rega. Nhoroondo yemari yekutsinhana kwemari yese kune vese.
Nhoroondo yematanho uye mitengo yekutsinhanha mu 2000.
Chiyero chekutsinhana kana makotesheni e US dhora ye 2000 yemwedzi wega wega uye yezuva rega rega. Chiyero chekutsinhana kana makotesheni e US dhora ye 2000 yemwedzi wega wega uye yezuva rega rega. Mari yekutsinhanha kana chirevo chemari yenyika 2000 yemwedzi wega wega uye yezuva rega rega.
Nhoroondo yematanho uye mitengo yekutsinhanha mu 1999.
Mari yekutsinhana uye makotesheni e 1999 yezuva rega rega. Mari yekutsinhana uye makotesheni e 1999 yezuva rega rega. Chiyero chekutsinhana kana makotesheni e US dhora ye 1999 yemwedzi wega wega uye yezuva rega rega.
Nhoroondo yematanho uye mitengo yekutsinhanha mu 1998.
Nhoroondo yemakotesheni emari yezuva rega rega re 1998. Nhoroondo yemakotesheni emari yezuva rega rega re 1998. Nhoroondo yezuva nezuva yemari yemari pasi rose.
Mari yekutsinhana uye makotesheni emari yepasi rose e 1997.
Mari yekutsinhanha yezuva rechokwadi re 1997. Mari yekutsinhanha yezuva rechokwadi re 1997. US dhora mwero wekutsinhanha wezuva rakakodzera re 1997.
Mari yekuchinjana, mari yemari yenyika inotenga 1996.
Mari yekutsinhanha yezuva rechokwadi re 1996. Mari yekutsinhanha yezuva rechokwadi re 1996. Nhoroondo yezuva nezuva yemari yemari pasi rose.
Mari yekutsinhana uye makotesheni emari yepasi rose e 1995.
Mari yekutsinhanha kana chirevo chemari yenyika 1995 yemwedzi wega wega uye yezuva rega rega. Mari yekutsinhanha kana chirevo chemari yenyika 1995 yemwedzi wega wega uye yezuva rega rega. Nhoroondo yezuva nezuva yemari yemari pasi rose.
Mari yekutsinhana uye makotesheni emari yepasi rose e 1994.
Pano unogona kuwana chiyero chechero mari yezuva chero ripi zvaro. Pano unogona kuwana chiyero chechero mari yezuva chero ripi zvaro. Nhoroondo yeiyo chiyero chekutsinhana chero mari yenyika 1994 yezuva rega rega.